Home » Drama, Essays.. » အချစ်အကြောင်း
သားလည်း မသိပါဘူးလေ… ဒီလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးကြည့်တာပါဗျ။
အချစ်မရှိတဲ့ ကမ္ဘာငယ်ကိုနေကြည့်လိုက် လွတ်လပ်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်။
အပေါ်က အားကိုတွေ က လူပြိုတွေ လို့ ရေးသွားတော့
ဒီလူကြီးက ကလေးနှစ်ယောက်အဖေ ပါ ။ ကလေးတွေက အမွှာဆိုတော့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်ပြီး သူ့နဖူးကြီး ထိပ်ပြောင်နေတာသာ ကြည့်ပါတော့ဟယ်။
ကိုပေရေ ကလေးတွေနေကောင်းလား မဒမ်ပေရော
အို.. ဘယ်နှယ့်လုပ် လူပြိုကြီးတွေပဲ လာမန့်တာတုန်း.. ချစ်ချစ်လေးနဲ့ ချစ်ချစ်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိတော့ဘူးလားဗျို့.. ဒီက လူပြိုကြီးတွေ အားကျကုန်ကြရအောင် …
ငှက်ကလေးရေ .. အချစ်အကြောင်းတွေကို ထောင့်စုံကနေ … ရေးပြသွားခဲ့တာပဲ … ။
အချစ်ဆိုတာ … ကြိုတင် မှန်းဆ .. တွက်ချက်ထားလို့ မရတဲ့ အရာမျိုးပါ … ။ ပုံသဏ္ဍန်တွေ ၊ စံနှုန်းတွေလည်း ကြိုတင်ချထားလို့ မရတဲ့ အရာမျိုးလို့ ထင်ပါတယ် … ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ကြုံမလဲခန့်မှန်းလို့ မရသလို …ဘယ်အချိန်ထိ တည်တ့နေမလဲဆိုတာလည်း .. အတပ်မပြောနိုင်တဲ့ အရာမျိုးပါပဲ … ။ လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြားလည်း ဖြစ်နိုင်သလို … တစ်ချိန်က မုန်းလွန်းတဲ့ ကိုယ့်ရန်သူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် … ။
ပုံသဏ္ဍန်မျိုးစုံနဲ့ ချစ်ခြင်းတွေရှိပါလျှက် … မလျော့မတင်း ချစ်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် … ပြင်းပြင်းပျပျကြီးဆိုလျှင်တော့ …. ရင်တွေပူရတာပဲ အဖတ်တင်မယ် … ။
အချစ်ဆိုတာပူလောင်တဲ့ မီးတောက်ငယ်တစ်ခု………ဘယ်သူမပြုမိမိအမှုစဉ်းစားကြည့်ပါအခု……. မေတ္တာဟာအေးမြတဲ့ စမ်းချောင်းငယ်တစ်ခု…………..၅၂၈ ထက်ပိုရင် ငိုပွဲတွေစု.. အဟင့်အဟင့်
ငှက်ကလေးရေ အချစ်ဆိုတာ လူတွေက သူ့ကိုငါချစ်တယ် ငါသူ့ကိုသိပ်ချစ်တယ် သူ့အတွက်ငါ့ပေးဆပ်တယ်.. ဒါတွေဟာ အလကားပါ သူ့ကိုငါချစ်တာမဟုတ်ဘူး ငါ့ကိုယ့်ငါချစ်နေတာပါ… ကိုယ့်ကသူ့ဆီကတစ်ခုခုကြောင့်သာယာနေမယ်…ကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်လို့ ကိုယ့်ကသူ့ကိုချစ်နေတာပါ… သူ့အသံလေးကိုချစ်နေတယ် သူသာအသံမထွက်ရင်ရောချစ်ဦးမလား…. သူ့မျက်နှာလေးကလှတယ် သူ့မျက်နှာလေး စုပ်ပြတ်သွားရင်ကောချစ်ဦးမလား…လူတွေအားလုံးဟာ သူများကိုချစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်နေတာပါ….
အပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေက သများကိုစောင်းရေးနေသလိုပဲ အဟိ အဟိ သူများလည်း ချစ်သူရှိပါတယ်… သူ့အသံလေးကို ကြားပြီးခြစ်တွားတာပါချင့်…အဟိ…(နောက်တာနော်)